मिस शेर्पा दाबुटी - मनोरन्जन - नारी
मिस शेर्पा दाबुटी
राजधानी शहरको रामहिटीस्थित रामनगर पार्टी प्यालेसमा सम्पन्न भएको शेर्पा समुदायका युवतीहरु लक्षित मिस शेर्पा २०१८ को उपाधि दोलखाकी दाबुटी शेर्पा हात पार्न सफल भएकी छिन् । ट्यालेन्ट अवार्ड पनि जित्न सफल दाबुटीले मिस शेर्पा उपाधि विजेताका रुपमा नगद पुरस्कार तीस हजार तीन सय तेत्तीस रुपैंया पनि प्राप्त गरिन् । यो संगै पनि मिस टुरिजम वल्र्डमा नेपालका तर्फबाट सहभागि हुने भएकी छिन् ।
क्याफे मितिनीकी चिफ सुपरभाइचरसमेत रहेकी उनी सगरमाथा आरोहीसमेत हुन् । उनले नेपाली कफीको प्रचार गर्दै गत सिजनमा सगरमाथा आरोहण गरेकी थिइन् । प्रतियोगितामा दावा याङ्जी शेर्पा फोटोजेनिक अवार्ड सहित फस्ट रनर अप भइन् भने निमा ल्हामु शेर्पा सेकेन्ड रनर अप भइन् ।
मिष्टर शेर्पा २०१८ तर्फ भने सोनम जाङ्बु शेर्पा उपाधि विजेता बने । उनले पुरस्कारका रुपमा तीस हजार तीन सय तेत्तीस रुपैयाँ प्राप्त गरे । प्रतियोगितामा पेम्बा शेर्पा फस्ट रनर अप तथा पासाङ शेर्पा सेकेन्ड रनर अप चयन गरिएका थिए । प्रतियोगिता दिपास इन्टरनेसनलको आयोजनामा कला सुब्बाको कोरियोग्राफीमा सम्पन्न भएको थियो ।
असार २, २०७६ - छानिए मि. एण्ड मिस एसईइ आइकन
असार १, २०७६ - मिस नेवाः ११३९ को उपाधि नीतु डंगोललाई
जेष्ठ १७, २०७६ - मिस नेपाल : अधिकांश गुमनाम !
देविका बन्दनाको माया घटेन असार १०, २०७६
नेपाली ठुम्का असार ९, २०७६
वरिपरि नै सर्वोपरि असार ६, २०७६
मिसेस् नेपाल ग्ल्यामको टाइटल मिनुलाई असार ४, २०७६
खेलाडी नम्रता असार २, २०७६
मिस नेवाः ११३९ को उपाधि नीतु डंगोललाई असार १, २०७६